ओली-प्रचण्ड संवादमा सहमति नजुट्नुको यस्तो छ कारण : सम्भावित मन्त्रीको सूचीमा को-को ? - Hello Patrika
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दैनिक भइरहेका घन्टौँसम्मका छलफल सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका बाँकी कामको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएका ओली-प्रचण्डले आज पनि छलफल गर्दैछन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा ओली-प्रचण्डबीच नै सहमति हुन सकेको छैन । दैनिक भएका घन्टौँसम्मका छलफल सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मापदण्ड बनाउने प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
किन भएन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सहमति ?
नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजीले अहिले भएका कसैलाई पनि हटाउन चाहनु भएको छैन । उहाँले पार्टीको गुटबन्दीलाई पनि हेर्नु भएको होला । अर्का अध्यक्षले पनि त्यहीँ कुरालाई पनि ध्यान दिनु भएको हुनसक्छ । त्यसैले यो गाठो कसिदै गएको छ । तर, यो समस्या पनि छिट्टै समाधान हुन्छ ।’
एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘दुबैजनाले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ध्यान दिएका छन् । महाधिवेशनमा आफू बलियो बन्नेगरी काम गरेको देखियो । यो अस्थायी युद्धविराम मात्र भएकाले लडाईँका लागि दुबैको तयारीका रुपमा अहिले भइरहेका छलफललाई बुझ्नुपर्छ ।’
नयाँ मन्त्रीको चर्चामा को को ?
अहिलेसम्म मापदण्ड तयार छैन । अध्यक्षद्वयबीच व्यक्तिका विषयमा छलफल नभए पनि मन्त्री बन्नेहरुको चर्चा नेकपाभित्र सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने चर्चा नेकपाभित्र छ । तर, नेम्वाङले आफू मन्त्री नबन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बताएका छन् ।